Nahoana isika no mila fifehezana mba hamoronana? | Famoronana an-tserasera
Matetika rehefa miresaka isika famoronana sy zavakanto ho famaizana maimaimpoana. Ny halaviran-tsindrimandry dia tonga amin'ny fotoana rehetra amin'ny andavan'andro ary mampandeha anao hiasa. Tsy manisa ny kalandrie ny ora asehontsika amin'izany fa voajanahary kokoa ny tenantsika rehefa miasa ny asantsika. Ny asa toradroa toy ny an'ny mpitantana dia tsy aseho. Ary satria tsy mitantana izahay, dia tsy manana fandaharam-potoana na torolàlana. Io tsy fifehezana io koa dia manakana ny saintsika.
Nahoana isika no mila fifehezana mba hamoronana? Ny tsy fahampian'ny fandaharam-potoana dia mety hahatonga antsika hiasa mihoatra ny ilaina, ary na dia toa toa tombontsoa aza izany rehefa tafiditra ao anaty tetikasa isika, indraindray dia tsy izany. Imbetsaka izany no tsy. Ireo fihoaram-pefy ireo dia mety hahatonga anao tsy hanana fahaizana mifantoka amin'ilay zavatra ataonao. Aza hadino koa ny tsy mahita fandrosoana. Ny fotoana rehefa tsy haintsika ny manohy dia tsara kokoa ny miala.
Indraindray dia mahatonga anao hiafara amin'ny fandaozany azy, hahatratra ny fotoana "Manomboka rahampitso aho" ary miditra amin'ny fandavana tsy tapaka ny fihoaram-pefy tsy eken'ny lohantsika. Instagram, Facebook, sns. lasa mpiara-dia amintsika hameno ireo toerana ireo. Izany no maha-zava-dehibe ny fifehezana ho an'ny famoronana.
Ny olona sasany mahavita manana ny fifehezana ilainy isan'andro isan'andro dia manome tsiny izany amin'ny "fika taloha" tamin'ny 8 ora. Ny 8 ora dia mizara ny andronao ho telo: Matory, Miasa ary ampiasao ny fotoana malalaka anananao. Na dia marina aza fa sarotra ny mahatratra fifehezana toy izany fa tsy ny rehetra no mahomby nandritra ny alina ataovy ity firafitra ity tsy misy ezaka sy fotoana fanokanana be dia be. Fa raha misy dingana azontsika atao alohan'ny hahatongavana amin'ny faratampony ny tanjontsika.
3 Ny fandroana sy ny mari-pana
Asa ratsy amin'ny fanosorana nify aorian'ny sakafo rehetra. Amin'ny fotoana sasany, betsaka ny olona mandao ity hetsika ity satria mijery ny findainy izy ireo ary nahita zavatra mahaliana ho an'io olona io. Manadino isika na amin'ny fotoana hafa dia mahita ny tenantsika any ivelany isika ary tsy afaka manao izany. Izany no hevitr'ireto 'asa' manaraka ireto. Izay manelingelina ny fotoanantsika no zava-dehibe.
Ny asa tsotra toy ny fanosotra nify aorian'ny fisakafoanana dia hamorona fahazarana amin'ny andronao. Ary hanomboka amin'ny famoronana baiko izany. Aza adino fa aza atsipiho io.
Ity fanazaran-tena ity dia azo natao ho an'ny fanasana lovia koa. Raha zatra miborosy nify ianao dia azonao atao ny manasa ny lovia raha vantany vao vita ny sakafo. Tsy maninona na manana mpanasa vilia ianao na efa misy manao ireo asa ireo. Rehefa vita ny sakafo, dia sasao amin'ny tananao ny loviao, ny verao ary ny cutlery anao.
Ho ahy, iray amin'ireo asa sarotra indrindra amin'ny fanaoko. Mialà eo am-pandriana miaraka amin'ilay asa efa misy ary mila manao azy. Ary amin'ny fitsipika miaraka amin'ny tanjon'ny famongorana azy aorian'ny ora vitsivitsy tamin'io andro io ihany. Fa ilaina izany. Ity fahazarana ity dia hanome anao filaminana amin'ny fiandohan'ny andronao. Nahavita ny iraka voalohany androany ianao, dia ho toy izany ny fiatrehanao ny hafa mora ny fomba fanamboarana ny fandriana.
Ary koa, rehefa mody any an-trano ianao, ny baiko dia hanampy anao hiala sasatra sy hankafizanao ny andro sisa tsy misy tokony hatao.
Ny fandroana sy ny mari-pana
Isika rehetra dia mahatsapa fa ilaina ny mandro amin'ny mari-pana amin'ny rano tsara. Ny ady amin'ny fialantsinintsika manokana no asa sarotra indrindra atrehantsika. Ny fampiasana ny segondra farany amin'ny fandroana ataontsika hiatrehana izany tsy fahazoana aina izany dia hanampy antsika hanana fifehezana bebe kokoa.
Betsaka ny fitsipi-pifehezana azontsika arahana eny an-dàlana hahatratrarana ny tanjontsika. Miankina amin'ny fiainanao ihany koa izany, nanolo-kevitra ny hifehezana ny tenako amin'ny asako aho miaraka amin'ny lahatsoratra, raha manoratra ianao dia tsara ny manao izany. Misy be pitsiny kokoa sy iraisana, fa ny zava-dehibe dia ny manomboka. Raha mieritreritra ianao fa tsy afaka manaraka ireto dingana 3 ireto indray mandeha dia atombohy amin'ny iray. Fa ataovy izay tsy hahazo aina indrindra aminao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Nahoana isika no mila fifehezana mba hamoronana?